नेपालद्वारा ओमानलाई २२२ रनको विजयी लक्ष्य, सागर पुनले बनाए ८४ रन ! – Everest Dainik – News from Nepal
नेपालद्वारा ओमानलाई २२२ रनको विजयी लक्ष्य, सागर पुनले बनाए ८४ रन !
काठमाडौं, भदौ १३ । मलेसियामा आजदेखि शुरु भएको एसिया कप छनोट प्रतियोगितामा नेपालले पहिलो खेलमा ओमानलाई २२२ रनको विजयी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । उसले ९ विकेटको क्षतीमा ओमानलाई २२२ रनको विजयी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको हो ।
टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले सुरुवातमा खराब प्रदर्शन गर्यो । तर, सागर पुन र आरिफ शेखको साझेदारीले नेपाली इनिङलाई सम्मानजनक अवस्थामा ल्यायो । आज कप्तान पारस खड्का, सुवास खकुरेल, दिपेन्द्रसिंह ऐरी, साेमपाल कामी र रोहितकुमार पौडेलको ब्याट चल्न सकेन ।
कप्तान खड्का ८, सुवास ४ र दिपेन्द्र ९ रनमै आउट हुँदा रोहित भने शून्य रनमै पवेलियन फिर्ता भए । साेमपाल ५ रनमा अाउट भए । यस्तै, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आज ४५ रन बनाए । उनले ६ चौका र एक छक्कको मद्दतमा सो रन बनाएका हुन् । मल्लले ६० बलको समाना गरे ।
यस्तै, आरिफ शेख ३६ रनमा आउट भए । उनले ७४ बलमा सो रन बनाएका हुन् । आरिफले ३ चौका र एक छक्काको सहयोगमा ३६ रन बनाए । आज नेपालका लागि सागर पुनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । राष्ट्रिय टिममा लामो समयपछि फर्केका उनले ८३ रन बनाए । उनी र बसन्त रेग्मी अन्तिम अाेभरमा अाउट भए । बसन्त शून्य रनमा आउट भएका हुन् ।
यस्तै, करण केसी २६ र सन्दिप लामिछाने २ रन बनाउँदै नट आउट रहे । सागरले ८६ बलको सामना गर्दै सो स्कोर बनाए । उनले आज ६ चौका र २ छक्का प्रहार गरे । ओमानका लागि बलिङमा मोहम्मद नदिमले ३, अजय लालचेता र बिलल खानले समान २-२ विकेट लिए ।
ट्याग्स: Nepal cricket team, nepal vs oman, sagar Pun